Cyberchain cybersecurity ndị mmadụ lekwasịrị anya na ogbako blockchain na-anabata ya omume, atọrọ ka ọ mee na abalị 19-20 nke ọnwa Nọvemba 2021 na Oriental Hotel Victoria Island, Lagos.
Ihe omume ngwakọ ga-ahụ nchịkọta nke cybersecurity na ndị ọkachamara blockchain, ndị na-akwado ndị na-anụ ọkụ n'obi, ndị ọrụ na-atụle nkà na ụzụ.
Cyberchain 2021 bu n'obi ijikọ na ọnụ ọgụgụ ndị sonyere ka ha na-enweta ike nke njikọ anụ ahụ na njikọ na-enweghị ikike mgbe ha na-ewu netwọk azụmahịa siri ike, na-eme egwuregwu smart, ịbịanye aka na nkwekọrịta, na ịnweta gigs ozugbo.
Ihe omume ngwakọ ga-ahụ ndị na-ekwu okwu isi okwu na ndị ọzọ na-ekwurịta nke ọma na cybersecurity na blockchain.
Ndị a bụ ndị isi okwu maka Cyberchain 2021
Ọkammụta Umar Garba Danbatta
Danbatta bụ onye isi oche onye isi oche (EVC) nke Nigerian Communications Commission (NCC). N'ịbụ onye na-eje ozi ugbu a n'ọkwa nke abụọ ya, EVC emewo ka ọrụ nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Nigeria sikwuo ike dị ka isi ihe na-enye aka na uto ITS Gross Domestic Product (GDP) na-eto eto, ebe ọ na-akwalite ntinye ego nke telecoms.
Tupu nhọpụta ya ka ọ bụrụ onye isi NCC na 2015, Danbatta, onye bụ prọfesọ nke injinia telekomunikashions, rụrụ ọrụ na agụmakwụkwọ dịka onye nkuzi ebe ọ na-elekọta ọtụtụ ọrụ na mpaghara dị iche iche nke nkwukọrịta, gbagoro n'ọkwa onye isi osote onyeisi oche na mahadum Nigeria. .
Akụkụ ndị ọzọ nke Danbatta nwere njiri mara ya bụ Strategies maka ịhụ na ọnweta zuru ụwa ọnụ na ọrụ maka ọrụ nkwukọrịta; Atụmatụ maka njikwa Spectrum dị irè na akụ na ụba na-emepe emepe; Okwu gbasara usoro ụlọ ọrụ na nke iwu maka ụkpụrụ dị mma nke ọrụ nkwukọrịta; na, Teknụzụ ọhụrụ na nke na-apụta na mmetụta na nhazi nke ngalaba nkwukọrịta nke akụ na ụba na-emepe emepe, n'etiti ndị ọzọ.
Kashifu bụ DG/CEO nke Nigeria Information Technology Development Agency (NITDA).
Ọ bụ onye MIT zụrụ strategist nwere ihe karịrị 15years nke ahụmahụ na mgbanwe azụmahịa, ngwọta architecture na IT ọrụ gafee ma onwe na ọha na eze. A makwaara ya dị ka Chief Information Technology Officer nke Nigeria.
Kashifu bụ onye na-ahụ maka nhazi na mmejuputa ihe ngosi nke Backbone Point of Presence yana njikọta akụrụngwa nkwukọrịta nke Galaxy jikọrọ ọnụ.
O jisiri ike mebie atụmatụ nke mụbara onyinye ICT na GDP Naijiria site na 9.7% na Q2 2018.
Ọ chịkọtara atụmatụ Ọdịnaya Mpaghara nke mụbara mmepụta mpaghara ICT site na 230% na 2017.
Mgbe ọ nọ na Central Bank, o mepụtara ebe nchekwa teknụzụ nke nyere echiche 360 ​​maka akụrụngwa IT nke Bank wee mee ka mkpebi dị mfe na ntinye ego IT ọhụrụ.
Kashifu bụ ọkachamara ọrụ ịntanetị nke Cisco – CCIE, asambodo netwọk kacha ama ama n'ụwa.
Obadare bụ onye na-arụkọ ọrụ, Digital Encode Limited. Ọ bụ onye ọrụ gọọmentị nke Forbes Technology Council, ọgbọ mbụ na onye ọchụnta ego nwere ọhụụ.
Ọ bụ Ọkachamara Nkà na ụzụ Ozi Chartered, onye mbụ EC-Council nwere ikike ntinye akwụkwọ ikike na Africa, Onye nyocha COBIT 5 nke abụọ na Africa na PCI DSS QSA.
Ọ bụ onye ọrụ aka ya na Central Bank of Nigeria (CBN) na onye isi mmemme maka ma Center for Information Security Intelligence na Hacker Counter Intelligence.
Mpaghara ọpụrụiche ya gụnyere Vulnerability Mgmt., Penetration Testing, Kọmputa Forensics, Risk Mgmt., QMS, ISMS, SMS, BCMS, IMS, TOGAF 9, COBIT 5, PCI DSS, PA DSS.
Jude bụ onye kpọbatara mmemme Cyberchain, ọgbakọ kacha etinye aka na nchekwa cyber na ndị mmadụ lekwasịrị anya na Naịjirịa. Ọ bụ multidimensional tech integrator na a elu flair maka dijitalụ mgbanwe.
Jude bụ onye nrụpụta isi obodo mmadụ, onye na-ahụ maka atụmatụ n'ofe dị iche iche gụnyere teknụzụ, ahụike, ezigbo ụlọ, ile ọbịa, ụdọ ọkọnọ, nrụpụta, azụmahịa e-commerce, na agụmakwụkwọ.
Ọ bụ onye na-ahụ maka ICT ọkachamara na-arụkọ ọrụ na ụlọ ọrụ dị iche iche ma na mpaghara ọha na nke onwe. Jud bụkwa onye na-akwado maka cybersecurity na blockchain na-akwado.
Ndị ọzọ na-ekwu okwu gụnyere:
Mfon Attih – Isi. Nkwekọrịta na ịzụ ahịa, DPR
Alicia Lyttle - Onye nchoputa, POW Social, Jamaica
Obi ike Staveley - Onye guzobere, Cybersafe Foundation
Somi Ochuba – Onye na-ahụ maka nchekwa mpaghara na Microsoft
Remi Adejumo - Onye isi nchịkwa na Cloudflex
Ruth Iselema - CEO / onye guzobere, Bitmama na Changera
Timi Agama – Onye isi/ ndebanye aha, mgbanwe, SEC Nigeria
Emmanuel Oyelakin - Onye isi oche, Lagos State E-Sport Association
Nwere ike ịdebanye aha maka ihe omume ahụ Ebe a.